Ururinta farshaxanka xun ee cusub oo ay saxiixday Mona Hatoum oo ay bilowday illycaffè
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ururinta farshaxanka xun ee cusub oo ay saxiixday Mona Hatoum oo ay bilowday illycaffè
illycaffè waxa uu soo bandhigayaa Ururinta Farshaxannimo ee cusub iyo, markii ugu horeysay, oo isbarbardhigaya gasacadaha la qurxiyey ee ay saxeexday Mona Hatoum.
Iyada oo leh asal faneed afartan sano ah, fanaanka muuqaalka ah ee Mona Hatoum waxaa si caalami ah loogu aqoonsaday gabaygeeda iyo siyaasadda oeuvre, taas oo lagu xaqiiqsaday noocyo kala duwan oo warbaahin ah oo aan caadi ahayn, oo ay ku jiraan rakibaadda, farshaxanimada, muuqaalka, sawir qaadista iyo shaqada waraaqaha.
Hatoum waxa uu markii ugu horaysay si weyn caan u noqday badhtamihii 1980-meeyadii iyada oo loo samaynayo bandhigyo taxane ah iyo shaqooyin fiidiyoow ah oo si xooggan diiradda u saaraya jidhka.
Tan iyo horraantii 1990-meeyadii shaqadeedu waxay u weecatay dhanka rakibidda iyo farshaxanka baaxadda leh ee ujeeddadeedu tahay inay ku mashquusho daawadayaasha dareennada iska soo horjeeda ee rabitaanka iyo kicinta, cabsida iyo soo jiidashada.
Tan iyo markaas, waxay sii wadaa inay horumariso luuqad taas oo la yaqaan, walxaha maalinlaha ah ee guriga inta badan loo beddelo waxyaabo shisheeye, is dhiibis ama hanjabaad ah.
Waxaad ku jirtaa liiska la garaacay: Shiinaha ayaa u hanjabay Taiwan...
Dalxiiska Duurjoogta: Baahida Sheekooyinka Midabka leh